U-Esoteric Healing - Alice Bailey (PDF) - I-Afrikhepri Fondation
Welcome Incwadi ye-PDF
I-Esoteric Healing - Alice Bailey (i-PDF)
LUkupholisa kuyisayensi eqondile esekelwe kwinani elithile lokutholwa kokuqala, phakathi kwalapho ulwazi lomthethosisekelo womuntu, wemizimba ehlukahlukene eyibumbayo, kusukela kokukhulu kakhulu kuya kokucashile kakhulu, kwamandla ahlukahlukene 'sebenza kuye, kanye nokusebenza kwengqondo nokufundwa kwezinkanyezi komphefumlo ikakhulukazi.
Umelaphi kufanele afune ukuhlanganisa umphefumulo wakhe, inhliziyo yakhe, ubuchopho bakhe nezandla zakhe. Lokhu kumvumela ukuba asakaze amandla abalulekile okuphulukisa ngaphezulu kwesiguli. Lokhu kungumsebenzi wamandla kazibuthe, ongalapha isifo noma ube sibi kakhulu lesi sifo okusolwa ukuthi uguliswa yisiguli, ngokwazi komphilisi. Ophilisayo kufanele afune ukuhlanganisa umphefumulo wakhe, ingqondo yakhe, inhliziyo yakhe kanye nokukhanya kwe-aura yakhe. Ngakho-ke, ukuba khona kwayo kungondla impilo yomuntu ogulayo. Lona ngumsebenzi wokudlubulundela. Izandla azidingekile. Umphefumlo usebenzisa amandla awo. Umphefumlo wesiguli uphendula ngokusabela kwe-aura yakhe emisebeni ye-aura yomphilisi, kuqhuma amandla omoya.
Umphulukisi kumele athole ukuhlanzeka kwamagnetic ngokuhlanzeka kwakhe kokuphila. Kufanele sikwazi ukukhipha imisebe ehlakazayo evela kuwo wonke amadoda ahlanganise izikhungo zawo ezimbili zekhanda. Uma le nsimu yamagnetic isungulwa, imisebe ivela.
Kwangathi umhlengikazi uqeqesha ngokwakhe ukwazi isigaba sangaphakathi somcabango noma isifiso salowo ofuna usizo lwakhe. Uzokwazi ukwazi umthombo lapho lesi sifo sifika khona. Masize axhumane imbangela yomphumela futhi wazi iphuzu eliqondile ukuthi kufanele kungenelela kanjani.
I-healer neqembu lokuphulukisa kumele ligcine intando yakhe. Akuyona intando okufanele isetshenziswe, kodwa uthando.
Ukwelashwa kwe-Esoteric, ivolumu 4
33,47€ kukhona kusitoki
4 okusha kusuka ku-33,47 €
I-8 isetshenzisiwe kusuka ku- € 27,43
Thenga i-33,47 €
kusukela ngo-Agasti 14, 2020 9:39
Usuku lokukhulula 1990-01-01T00:00:01Z
Usuku lokushicilela 1990-01-01T00:00:01Z
Imiyalezo efihlekile yamanzi - Masaru Emoto (PDF)
World of Fire - U-Elena Roerich (PDF)